एक पिताले आफ्नी छोरीलाई दिएको यस्तो सन्देश, जुन पढ्दा संसार रोयो ! एकपल्ट अबस्य हेर्नुहोला… « गोर्खाली खबर डटकम
काठमाडौं । हाम्रो समाजमा आज आफ्ना अभिभावक प्रतिको सम्मान विस्तारैं कम हुँदैं गइरहेको जस्तो देखिन थालेको छ । हरेक अभिभावकले आफ्नो सन्तानको भविष्यको लागि सकारतात्मक सोच्ने गर्दछन । आज हामी एकजना बुवाले आफ्नो छोरीलाई भनेको यो अत्यन्तै उपयोगी कुरा तपाईमा जानकारी गराउँन गइरहेका छौं ।
बुवाले छोरीलाई उसको आइफोन उपहार दिनुभयो ।भोलीपल्ट छोरीलाई सोध्नुभयो, प्यारी छोरी ! आइफोन पाएपछि तिमीले सबैभन्दा पहिला के गर्यौ ?
बाबाः तिमीलाई यस्तो गर्न कसैले बा’ध्य गर्यो कि आफैं गरेको ?
छोरीः लाग्दैन,बल्कि निर्माता स्वयंले नै कभर र स्क्रेच गार्ड लगाउने सल्लाह दिएको थियो,
बाबाः त्यसो भए त आइफोन नै देख्नमा ख’राब देखिन्छ होला, त्यसै कारण तिमीले कभर मगाएको होला है ?
छोरीः होइन बाबा, परन्तु आइफोन ख’राब न होस भनेर मगाएको हो ।
बाबाः त्यसो भए कभर लगाउँदा त्यसको सुन्दरतामा कमी आयो होला ?
छोरीः आएन हजुर, यसको विपरीत कभर लगाउँदा आइफोन अझै धेरै सुन्दर देखिन्छ,
अब पिताले छोरीलाई स्नेह (प्रेम) ले हेर्दै यस्तो भन्नुभयो,छोरी, आइफोन भन्दापनि ज्यादा महंगो र सुन्दर तिम्रो शरीर हो र यो घरको र हाम्रो ईज्जत हो । तीमीले यो शरीरको अं’गहरुलाई कपड़ाले कवर गर्दा शरीरको सुन्दरता धेरै बढ्छ । छोरीसँग बाबाको यो कुराको कुनै जवाफ थिएन, थियो त केवल आँखामा आं’शु देखिएको थियो ।
यो कुरा हामीले कसैंको सम्मानमा ठे’स पुगोस भनेर होईन बल्की जनचेतना फैलियोस भन्ने ध्यएका साथा राखेका हौं । राम्रो लाग्यो भने सेयर गर्न सक्नुहुन्छ ।(जनाबोलिबाट )/सांकेतिक तस्बिर गोगूल बाट